Talo Madaxwayne Oo Aan Hore Loo Arag Keliya Maaha Kiristaanka iyo Jarmalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Daalacanayo Hadda » Talo Madaxwayne Oo Aan Hore Loo Arag Keliya Maaha Kiristaanka iyo Jarmalka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
11 min akhris
Madaxweyne Frank Walter Steinmer iyo xaaskiisa Elke Büdenbender
Cinwaanka Christmas-ka ee maanta
Madaxweynaha Federaalka Jarmalka Frank-Walter Steinmeier oo jooga Schloss Bellevue ee Berlin waa fariin ay tahay in aduunka oo dhami fiiro gaar ah u yeesho. Dariiq dheeli tiran, degdeg ah oo caalami ah oo hore u socod ah oo uu leeyahay madax Qaran leh aragti, iyo dareen xaqiiqo ah.
Frank-Walter Steinmeier waa Madaxweynihii XNUMX-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka:
Walaalaheyga Jarmalka ah, xaaskeyga Elke Büdenbender, iyo waxaan idiin soo dirayaa salaan diirran dhammaan Christmas-kan.
Haddi aad maalmahan la qaadan doonto kaligaa ama qoyskaaga, guri xafladeed ama wakhti habeenimo, qolka xanaanada, kalkaalisada ama dhakhtarka qaybta, ama shaqada booliiska ama saldhiga dab-damiska - meel kasta oo aad joogto. Dhacdo: Waxaan dhammaantiin idiin rajaynaynaa ciida Kirismaska ​​oo faraxsan oo barakeysan!
Markaynu dib u milicsano sannadkii ina dhaafay, waxa aynu aragnaa wax badan oo ina walwalaya, sidoo kale, oo cabsi nagu abuuray. Waxaan xasuusannahay daadadka masiibada ah ee xagaaga. Waxaan xasuusannahay askartii ka soo guryo-noqotay Afgaanistaan, iyo sidoo kale dadkii halkaas ku haray iyagoo silic iyo macluul ku jira. Waxaan ka walaacsanahay wararka aan ka maqalno gobollo badan oo ka mid ah adduunkeenna qalalaasaha ah, sidoo kale iyo gaar ahaan ka imanaya Bariga Yurub.
Haddana sanadkan ina dhaafay waxa kale oo la arkay wax badan oo rajo ina siinaya.
Waxaan ka fekerayaa wadajirka baaxadda leh ee dhibanayaasha daadadka, deeqaha, iyo gaar ahaan kaalmada wax ku oolka ah ee ballaaran. Waxaan ka fekerayaa dad badan oo dhallinyaro ah iyo kuwo aan da'yar ahayn oo u heellan ilaalinta deegaanka iyo yaraynta isbeddelka cimilada. Waxaanan ka fekerayaa dhammaan intiina u codaysay doorashooyin muhiim ah, iyo sidii dimuqraadiyadda ahayd ee xukunka loogu wareejin lahaa jawi ixtiraam leh.
Dad badan ayaa hadda si xiiso leh u daawanaya oo rajo ka qaba in la helo dowlad cusub oo Federaal ah oo u dejisay hadafyo hiigsi leh oo ay ugu adeegeyso dalkeena.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ugu sarreeya, si kastaba ha ahaatee, waxaan ka fekerayaa ballanqaadka ay muujiyeen mutadawiciinta dhammaan dacallada bulshadeena. Wax badan ayaa la sameeyaa gadaal, maalin, maalin; dad aad u badan ayaa gacmaha isku rogaya oo caawinaya sida arrintu tahay. Maalinba maalinta ka danbaysa waxay dhamaantood isku xidhaan shabakada ka samaysanaysa qaabka togan ee bulshadeena oo isku xidha.
Haa, ka dibna waxaa jira COVID-19.
Dhawaan, waxay noqon doontaa laba sano tan iyo markii masiibada bilawday inay maamusho nolosheena - halkan iyo adduunka oo dhan.
Marar dhif ah ayaanu si toos ah u dareemnay nuglaanshaha nolosheenna bini'aadamka ah iyo saadaalin la'aanta mustaqbalka - bisha soo socota, usbuuca soo socda, xitaa maalinta xigta. Hadda, mar labaad, waxaan wajahaynaa xannibaadyo waaweyn si aan nafteena uga ilaalinno nooc cusub oo fayraska ah.
Haddana waxaan sidoo kale barannay inaanan awood lahayn. Waan ilaalin karnaa nafteena iyo kuwa kaleba. Waxaan ku faraxsanahay in badidoodu ay garteen kartida uu tallaalku hayo. Immisa rafaad weyn, immisa dhimasho ayaa ilaa hadda ka hortagtay!
Marar dhif ah gobolkayagu ma lahaa mas'uuliyaddan oo kale si uu u ilaaliyo caafimaadka dadka iyo nolosha?
Si loo cadaalad sameeyo mas'uuliyaddan waxay u baahan tahay saynisyahano khabiiro ah, dhakhaatiir, iyo kalkaaliyeyaal caafimaad, saraakiil sharci fulinta mas'uul ka ah, iyo shaqaale ka tirsan maamulka dadweynaha. Dhammaantood waxay sameynayaan intii karaankooda ah. Dhammaantoodna waxa ay helayaan aqoon cusub, iyaga oo saxaya malo-awaal been-abuur ah, oo la jaanqaadaya tallaabooyinka. Dadku way samayn karaan
khaladaadka, laakiin sidoo kale way bartaan.
Markaa qaranku waajib baa saaran oo waa inuu wax ka qabtaa, laakiin maaha dawladda oo keliya.
Dawladdu ma xidhi karto waji-xidho ilaalin ah meesheenna, mana heli karto
Tallaalka annaga oo naga wakiil ah.
Maya, qof walba oo naga mid ah ayay ku xiran tahay inuu kaalinteena ka qaato!
Waxaan jeclaan lahaa inaan qalbigayga uga mahadceliyo baaxadda, badiyaa aamusnaanta, aqlabiyadda waddankeenna oo si taxaddar leh oo xilkasnimo leh u dhaqmayay muddo bilo ah hadda. Sababtoo ah waxay garwaaqsadeen in ka badan sidii hore, waxaan ku tiirsanahay midba midka kale - aniga kuwa kale, iyo kuwa kale aniga.
Dabcan, waxaa jira khilaafyo halkan.
Dabcan, waxaa jira hubanti la'aan iyo cabsi, waana muhiim in wax laga qabto. Dalkeena cidna lagama hor istaago. Waxa ugu muhiimsan waa sida aan uga hadalno arrimahan - qoysaskeena, saaxiibadayada, meel fagaare ah. Waxaan dareensanahay in laba sano ka dib ay niyad-jabku sii kordhayaan; xanaaqu waa mid baahsan; Waxaan si sii kordheysa u aragnaa kala fogaansho iyo, wax laga xumaado, gardaro furan.
Waa run in dimuqraadiyadda aynaan dhammaanteen ahayn inaynu isku ra'yi noqonno. Laakiin waxaan idinka baryayaa inaad tan xusuusataan: Waxaan nahay hal waddan.
Marka masiibadadu dhammaato, waxaan u baahanahay inaan weli awoodno inaan isku eegno isha. Oo markii cudurku dhammaado, waxaan weli rabnaa inaan wada noolaanno.
Faafida ma dhammaan doonto si lama filaan ah. Waxay nagu hayn doontaa muddo dheer weli. Durbana way ina beddelaysaa, iyadoo xataa raadkeeda ku reebaysa afkeenna maalinlaha ah. Kaliya maahan inaan baranno ereyo cusub - sida "dhacdo" ama "2G+". Maya, ereyadayadii hore ee qaaliga ahaa, sidoo kale, waxay qaadanayaan tayo cusub oo degdeg ah.
Waa maxay macnaha kalsoonida, tusaale ahaan? Ma aha kalsooni indho la'aan, cad. Laakiin ma laga yaabaa inay la macno tahay sidoo kale ku tiirsanaanta talada karti leh, xitaa haddii aan shakigayga aan gebi ahaanba la baabi'in?
Waa maxay macnaha xorriyaddu?
Xoriyaddu ma tahay mudaharaad qaylo ah oo ka dhan ah xeer kasta? Mise mararka qaarkood macnaheedu maaha inaan naftayda xaddido si aan u ilaaliyo xorriyadda dadka kale?
Waa maxay macnaha masuuliyaddu?
Ma si fudud ayaynu u nidhaahnaa: "Taasi waa wax ay dadku iyagu go'aansadaan"?
Run ahaantii miyaanay run ahayn in la idhaahdo go'aankaygu wuxuu saameeyaa dad badan oo kale?
Xorriyadda, kalsoonida, mas'uuliyadda: waxa ay ula jeedaan waa wax aan ku gaarno heshiis - mar kale mustaqbalka sidoo kale, iyo sidoo kale arrimaha kale ee waaweyn sida yaraynta isbeddelka cimilada. Halkan, sidoo kale, ma jiri doonto hal jawaab oo sax ah oo qof walba qancisa.
Hase yeeshe, waa inaan gaadhno heshiis cusub, marar badan iyo mar kale. Waxaana hubaa in aan heshiin karno.
Ka dib oo dhan, waxaan horay u xaqiijinay marar badan inaan sidaas samayn karno.
Walaalayaal Jarmal ah, waxay ahayd Christmas-ka in ka badan 50 sano ka hor markii dadku markii ugu horreysay ku wareegeen dayaxa. Kuwa da'da weyn ee naga mid ah ayaa laga yaabaa inay xusuustaan ​​sawirada: halkaas oo meel bannaan ah, wakhtigaas ee horumarka ugu weyn ee bini'aadamka, Dhulkeena yar, ee nugul wuxuu ahaa mid muuqda si aan horay loo arag. Halkaa ayay ahayd halka horumarka oo dhami ka bilaabmay, waana halkan aynu ku wada nool nahay, culays iyo rajo, murugo iyo farxad.
Munaasabaddaas, seddexda Apollo 8 cirbixiyeennada ayaa akhriyay bilawga sheekada Baybalka ee abuurista - waxayna ku soo gabagabeeyeen fariintooda kirismaska ​​ereyada "Ilaah ha idin barakeeyo dhammaantiin dhulka wanaagsan."
Walaalahayga Jarmalka, taasi waa rabitaanka aniga iyo xaaskayga aan u qabno adiga iyo annagaba: in ay sii ahaan doonto dhulka wanaagsan dhammaanteen, in halkan uu noqon doono mustaqbal wanaagsan dhammaanteen. Kirismaska ​​Farxada leh!
Waa kuma Frank Walter Steinmeier?
Frank-Walter Steinmeier wuxuu ku dhashay Detmold (degmada Lippe) 5 Janaayo 1956. Wuxuu guursaday Elke Büdenbender tan iyo 1995. Waxay leeyihiin hal gabadh.
Ka dib markii uu dhiganayay dugsiga naxwaha ee Blomberg oo uu sameeyay laba sano oo shaqo milatari ah, Frank-Walter Steinmeier wuxuu shahaadadiisa sharciga ka bilaabay Jaamacadda Justus Liebig ee Giessen 1976. Laga soo bilaabo 1980, wuxuu sidoo kale bartay cilmiga siyaasadda. Waxa uu ku baastay imtixaankii ugu horeeyay ee sharciga gobolka 1982 ka dibna waxa uu ku qaatay tababarkiisii ​​sharciga ahaa Frankfurt am Main iyo Giessen. Waxa uu dhamaystay tabobarkan markii uu ku guulaystay imtixaankii labaad ee sharciga gobolka 1986kii,kadibna waxa uu cilmi-baare ka noqday madaxa sharciga iyo cilmiga siyaasada ee jaamacada Justus Liebig ee Giessen. Sannadkii 1991-kii, waxa lagu abaalmariyay shahaado-sharafeedka dhakhtarnimada "Muwaadiniinta darbi-jiifka ah - Waajibka bixinta guriyeynta iyo xuquuqda meel ay ku noolaadaan. Dhaqanka iyo rajada laga qabo faragelinta dowliga ah si looga hortago loogana gudbo hoy la’aanta” .
Isla sanadkaas, Frank-Walter Steinmeier waxa uu u guuray Chancellery State of Land Lower Saxony ee Hanover, halkaas oo uu uga shaqeeyay sidii sarkaal miiska sharciga iyo siyaasadda warbaahinta. 1993, wuxuu noqday madaxa xafiiska Gerhard Schröder, wasiir-madaxweyne Land Lower Saxony. Sannadkii xigay, waxa loo magacaabay Madaxa Waaxda Tilmaamaha Siyaasadda iyo Isku-dubbaridka iyo Qorshaynta ee Wasaaraddaha. Laba sano ka dib, waxa uu noqday Xoghaye Dawladeed iyo Madaxa Maamul Goboleedka Land Lower Saxony.
1998-dii, waxaa loo magacaabay Xoghaye Dawlad-goboleedka Chancellery-ka Federaalka iyo Guddoomiyaha Dawladda Federaalka ee Adeegyada Sirdoonka Federaalka. Waxa uu sidoo kale soo noqday Madaxa Chancellery Federaalka 1999. Frank-Walter Steinmeier waxaa loo magacaabay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Federaalka 2005 wuxuuna sidoo kale ahaa ku xigeenka 2007. 2009, wuxuu ku guuleystay kursi si toos ah loo soo doortay oo ku yaal Land Brandenburg wuxuuna noqday Xubin ka tirsan baarlamaanka Jarmalka ee Bundestag. Kooxda baarlamaanka ee xisbiga Social Democratic Party ee Jarmalka ee Bundestag ee Jarmalka ayaa gudoomiye u doortay. Afar sano ka dib, wuxuu noqday markii labaad Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Federaalka, wuxuuna xilkan hayay illaa Janaayo 2017.
Frank-Walter Steinmeier waxa uu helay abaalmarino iyo abaal-marinno badan, oo ay ku jiraan Abaalmarinta Ignatz Bubis ee Fahamka, Abaalmarinta Yurub ee Dhaqanka Siyaasadda, Abaalmarinta Bosphorus ee Fahamka Yurub, Abaalmarinta Willy Brandt, Abaalmarinta Dulqaadka ee Akadeemiyada Evangelical ee Tutzing iyo Ecumenical Abaalmarinta Akademiyada Katooliga ee Bavaria. Waxaa lagu abaalmariyay shahaado-sharafeedka jaamacadda Paderborn, Jaamacadda Cibraaniga ee Jerusalem, Jaamacadda Piraeus iyo Jaamacadda Federaalka Ural ee Ekaterinburg. Sidoo kale waa muwaadin sharaf leh ee magaalooyinka Sibiu iyo Reims.
Frank-Walter Steinmeier waxaa loo doortay Madaxweynaha laba iyo tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka 12kii Febraayo 2017.